नियमित महिनावारीका लागि कस्तो खानपान गर्ने ? - Everest Talk
नियमित महिनावारीका लागि कस्तो खानपान गर्ने ?1 min read
महिलाको शरीरमा हर्मोनको गडबडी हुनुमा खानपानको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने गरेको एक अध्ययनले जनाएको छ ।
२०७६, ११ फाल्गुन आईतवार १६:५८
in खबर, टिप्स, स्वस्थ्य
महिनावरी किन गडबडी हुन्छ ? यसबारे महिलाहरू वेखबर हुन्छन् । हुन पनि महिनावारी गडबडी हुनुको कारण एकमात्र छैन । अनेक कारणले यस्तो समस्या हुने गर्छ । शहरिया वा चिकित्सकको पहुन्चँमा भएका महिलाहरू त आवश्यक परामर्श र परीक्षणका लागि अस्पताल धाउन सक्छन् । तर, ग्रामिण क्षेत्रका अझ दूरदराजका महिलाहरू भने भित्रभित्रै यो पीडा गुम्साएर बस्ने गर्छन् ।
महिनावारी किन गडबडी हुन्छ त ?
भनिन्छ, सही किसिमको खानपानले पनि महिनावरी गडबडीको जोखिम हुँदैन । अर्थात महिनावरी नियमित गराउनका लागि कतिपय खानेकुरा उपयोगी हुनेगर्छ ।
महिलाको शरीरमा हर्मोनको गडबडी हुनुमा खानपानको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने गरेको एक अध्ययनले जनाएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार जो महिला खानमा कार्वोहाइडे्रटस्को सेवन धेरै गर्छन्, उनीहरूमा महिनावारी समय अगावै सुरु हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ ।
गेडागुडीले सामान्य गडबडी :
लिड्स विश्वविद्यालयले व्रिटेनका नौ सय १४ महिलामा गरेको अध्ययनमा माछा, मटर तथा गेडागुडीको सेवन गर्ने महिलाको महिनावारीमा सामान्य गडबडी हुने गरेको पाइएको थियो । जबकी महिनावारी गडबडी हुनुमा खानपानका साथै अन्य कुराले पनि असर पार्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
उक्त अध्ययन जर्नल अफ एपिडिमियोलोजी एण्ड कम्युनिटी हेल्थमा प्रकाशन थियो । उक्त अध्ययनमा महिलाहरू समक्ष खानपानबारे प्रश्न सोधिएको थियो । जसमा फलाहार तथा सागसब्जीको ज्यादा सेवन गर्ने महिलाहरूमा महिनावारी ढिलो हुन गरेको पाइएको थियो । जुन एक देखि डेढ वर्षको बिचमा रहेको पाइएको थियो ।
जबकी कार्वोहाइड्रट्सको ज्यादा सेवन गर्ने महिलाहरूमा महिनावारी एक देखि डेढ वर्ष पहिले नै सुरु हुने गरेको पाइएको थियो । उक्त शोधमा शोधकर्ताहरूले खानपानका बाहेक महिलको वजन, प्रजनन स्वास्थ्य तथा विभिन्न हर्मोको प्रभावबारे पनि उल्लेख गरेका थिए ।
फलाहार सागसब्जीले महिनावारी ढिलो:
प्रजनन स्वास्थ्य तथा हर्मोन सम्बन्धि समस्यालाई आणुवंशिक समस्यासित पनि जोड्ने गरिन्छ, जसको सोझो असर महिनावारीमा पर्ने गर्छ । शोधकलर्ताहरूले भने अनुसार फलाहार सागसब्जीमा एन्टीअक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ, जसको सेवनले महिनावारी ढिलो हुने गर्छ ।
जबकी माछामा ओमेगा ३ फयाटी एसिड पाइन्छ र, यो माछामा मात्र पाइने तेल हो । यसको सेवनले शरीरमा एन्टीअक्सिडेन्टको मात्रा बढ्ने गर्छ । जबकी कार्वोहाइ्डे«ट्सको सेवनले शरीरमा इन्सुलिन प्रतिरोधक क्षमतामा वृद्धि हुने गर्छ ।
यसले सेक्स हर्मोनलाई समेत प्रभावित पार्नुका साथै एस्ट्रोजनको मात्रा समेत बढाउँछ । यस्तो अवस्थामा महिनावारिमा गडबडी हुनुका साथै समय भन्दा पहिले महिनावारी हुने सम्भावना उच्च हुने गर्छ ।
यस शोधका शोधकर्ता जेनेट कैहका अनुसार महिनावारी हुने अमेर र महिलाको स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुन्छ । जो महिलामा महिनावारी समयभन्दा पहिले हुन्छ, उनीहरूमा मुटु तथा हड्डी सम्बन्धि समस्या हुने गर्छ । त्यस्तै, जो महिलामा महिनावारी समयभन्दा ढिला हुने गर्छ, उनीहरूमा स्तन तथा गर्भाशयको क्यान्सर हुने सम्भावना अधिक हुने गर्छ ।
काउली, हरियो साग, बेसार, नरिवलको तेल लगायतका खाद्यान्नलाई महिलाको अण्डासयको गुणस्तरीयतासित जोडेर हेरिन्छ । तर त्यसको अर्थ यसले प्रजनन स्वास्थ्यको गुणस्तर बढाउँछ भन्ने कदापी हैन । यसको सिधा असर अणुवंशिक कारणसित हुने गर्छ ।